Nkwalite weebụsaịtị | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Mgbasa ozi dị mfe. Kpọsaanụ ọtụtụ puku kwa ụbọchị, n'efu
Safelist m kacha amasị m
by Beverly Obere on Nwere ike 10, 2021
Ọ bụrụ na ị na-agbazi nzukọ n'ịntanetị, ọ kwesịrị ka ị kwenye na ị zubere ịzụ ahịa. Rankkpụrụ ahụ gbanwere oge ọ bụla nke ụbọchị ma nke ahụ dabere na okporo ụzọ a na-ebugharị na saịtị gị.
09/23/2021 01:11 elekere GMT
Echiche niile nke na-egwu ebe a bụ na ị ga-eweta ndị mmadụ ka ị bịa na saịtị gị. Nzaghachi ha ga - enye ga - abụzi ohere ị ga - enweta ọtụtụ ndị ọbịa. Nke ahụ na - egosi ọtụtụ okporo ụzọ maka ntanetị gị website.
E nwere ụzọ dị iche iche otu ị ga - esi nwee ike ịdọrọ okporo ụzọ na saịtị gị. N'ime ha bụ ịzụ ahịa ahịa, na-eme ka e guzobe mkpado HTML na ibe gị, na mgbe nke ahụ gachara banyere saịtị blog nke ndị ọzọ. Maka nkọwa ndị ọzọ, gaa n'ihu na-agụ n'okpuru.
Short ederede Marketing
Marketingzụ ahịa ọsịsa bụ otu n'ime usoro ịnwale na nyocha nke ịme ndị ọbịa ezubere iche maka saịtị gị. Ka ibe gi bara uru karie, otu a ka otutu ndi mmadu gha enweta gi.
G in i ma ob ur u na i ch ugh i ike ike ihe omume gi?
Ohere nwere ike ịbụ na ị gaghị enwe oge zuru ezu iji mesoo ọrụ ọzọ na mgbakwunye na ị na-agba ọsọ na saịtị gị na nsogbu ndị ọzọ dị n'ịntanetị.
N'ihe niile, isi okwu gị bụ inwe ike ịnye ndị na - agụ akwụkwọ gị ezigbo akwụkwọ na ibe gị. Site na nnukwu ọrụ nchịkwa na azụmaahịa dị n'aka gị, ị gaghị enwe ike ijikwa ọrụ ọzọ, agbanyeghị, ebe ị chọrọ itinye uche gị n'ịmezu okporo ụzọ na ụzọ, ị nwere ike kpunye onye ọzọ ọrụ ka ịkwalite ọrụ ịzụ ahịa gị. Nwere ike iji ndị ghostwriters mgbe niile maka saịtị gị.
Na-atụle Blogs ndị ọzọ
Methodzọ ọzọ iji nwetakwu okporo ụzọ bụ site na iji mkparịta ụka na saịtị ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ kwụsịrị ịrụ ọrụ iji ghọta ọrụ ha. Site na ile anya na ebe nrụọrụ weebụ na-ewu ewu na ebe nrụọrụ weebụ ma na-ahapụ ọgụgụ isi na-atụle nke ọ bụla n'ime isiokwu ị ghọtara, ndị ga-agụ post gị nwere ike mechaa nwee mmasị ịgbaso njikọ gị ma chọpụta ihe gbasara gị na ihe ị ghọtara otu isiokwu na-echegbu ha.
Asụsụ ederede HTML ma ọ bụ hypertext nwere ike ịbụ ntakịrị ọrụaka maka ndị ọzọ. See na-ahụ na ọ dị mkpa na ị na-etinye akara ngosi aha ziri ezi nke na ụlọ ọrụ ọchụchọ ga-egosi ozugbo ozi nke na-achịkọta ihe saịtị gị gbasara. Mejupụtara isiokwu achọrọ na ngosipụta dị na mkpado mkpado Meta na nkọwapụta Meta.
Dịka o nwere ike ịbụ na ị ghọtara ugbu a, ọ dị mfe ịtụkwasị okporo ụzọ gaa na saịtị gị ka ị ghọtara ihe ndị dị mkpa ịme. Kedu ihe ị ga - eche mgbe ị ga - enweta ibe gị ogo ugbu a?
Rankkpụrụ ahụ gbanwere oge ọ bụla nke ụbọchị ma nke ahụ dabere na okporo ụzọ a na-ebugharị na saịtị gị.
Echiche niile nke na-egwu ebe a bụ na ị ga-adọta ndị mmadụ n'otu n'otu ịga na saịtị gị. E nwere ụzọ dị iche iche otu ị ga-esi nwee ike ịdọrọ okporo ụzọ na saịtị gị. Marketingzụ ahịa ọsịsa bụ otu n'ime nnwale na enyocha ụzọ iji mee ndị ọbịa ezubere iche gaa na saịtị gị. See na-ahụ na ọ dị mkpa na ị na-etinye akara ngosi aha ziri ezi nke na ụlọ ọrụ ọchụchọ ga-egosi ozugbo nkọwa nke na-achịkọta ihe saịtị gị gbasara.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Mmepụta Ihe, Okporo ụzọ echepụtara, Nkwalite weebụsaịtị